Dhammalayeik: ဒါနထက်သာ မြတ်မေတ္တာ
*****May you be happy, healthy, wealthy and peace of mind those who have been visiting to my blog.*****
*****သစ်ပင်အရိပ် ဆွေမျိုးရိပ်နှင့် မိရိပ်ဘရိပ် ဆရာရိပ်ထက် မင်းရိပ်သည်သာ ဆင့်ဆင့်သာ၏။ ထိုမှတစ်ဖြာ မြတ်စွာဟောကြား တရားဆာယာ အရိပ်မှာကား လွန်စွာအေးမြ ချမ်းသာရ၍ မှီကြခိုသူ များဗိုလ်လူတို့ အပူခပ်သိမ်း ပ,ပျောက်ငြိမ်း၏ ။*****
"တစ်နေ့သုးံခါ၊ အိုးတစ်ရာဖြင့်၊ ချက်ကာထမင်း၊ ကျွေးမွေးခြင်းထက် ၊ မယွင်း စင်စစ်၊ နို့တစ်ညှစ်စာ၊ ကြိမ်သုးံခါမျှ၊ မေတ္တာပွားများ၊ ကျိုးကြီးမားသည် ၊ ဘုရား မြတ်စွာ မိန့်ခွန်းတည်း။"
မြတ်စွာဘုရားရှင်က လူတစ်ယောက်ဟာ နံနက် တစ်ကြိမ် ထမင်း အိုးကြီးတစ်ရာချက်ပြီး ကျွေးမွေး လှူဒါန်းတယ်။ နေ့လည် တစ်ကြိမ် ထမင်း အိုးကြီးတစ်ရာချက်ပြီး ကျွေးမွေးလှူဒါန်းတယ်။ ညနေ တစ်ကြိမ် ထမင်း အိုးကြီးတစ်ရာချက်ပြီး ကျွေးမွေး လှူဒါန်းတယ်။
လူတစ်ယောက်ကတော့ နံနက် တစ်ကြိမ် နို့တစ်ညှစ်စာ မေတ္တာပွါးတယ်။ နေ့လည် တစ်ကြိမ် နို့တစ်ညှစ်စာ မေတ္တာပွါးတယ်။ ညနေ တစ်ကြိမ် နို့တစ်ညှစ်စာ မေတ္တာပွါးတယ်။
အဲဒီ ထမင်းအိုးကြီး တစ်ရာ ချက်ပြီးသုးံကြိမ်လှူတဲ့ အလှူဒါနထက် နို့တစ်ညှစ်စာ မေတ္တာသုးံကြိမ် ပွါးတာက ပိုပြီးကျေးဇူးများတယ်လို့ မိန့်ဆိုထားပါတယ်။
တစ်ချို့တစ်ချို့သော သူတွေကတော့ မေတ္တာရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မယုံကြည်ချင်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင် ခဏခဏ လက်တွေ့ကျကျ မေတ္တာပို့ အမျှဝေကြည့်ပါ ။ သိသာပါလိမ့်မယ်။
ထို့ကြောင့် မေတ္တာဘာဝနာကို မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထားနဲ့ ယုံယုံကြည်ကြည် ထိထိမိမိသာ ပုံမှန်ပွါးများမယ် ဆိုရင် သိပ်ပြီးတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အလားအလာ ကောင်းတွေကို တွေ့မြင် ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ ၊
အလှူ မှန်သမျှတွင် တရားအလှူသည် အမြတ်ဆုးံ ၊
Dhamma- gift excels all other gifts.
Posted by အရှင်စန္ဒိမာ (ဓမ္မလရိပ်) at 10:00 PM
ဉာဏ်တော်အမြင့် (၁၇၀)ပေရှိကာ ကျောက်သားချည်းဖြင့်သာ ပြုလုပ်ထားသော အလွန်လက်ရာမြောက်သည့် အသောကမင်းကြီး၏ ကောင်းမှု ဗုဒ္ဓဂယာ မဟာဗောဓိ စေတီတော် ။ ဤမဟာအောင်မြေတွင် ခြောက်နုစ်ပတ်လုးံဒုက္ကစရိယာ ကျင့်တော်မူပြီးသော ဘုရားအလောင်းတော်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခု၊ ဘီစီ ၅၈၉ ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေညတွင် မဟာဗောဓိညောင်ပင်အောက်၌ မာရ်ငါးပါးကိုအောင်တော်မူကာ ဉာဏ်တော်သုးံပါးလုးံကို အစဉ်ရပြီး ဘုရားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိတော်မူပါသည်။
ဖွါးရာဌာန ပူဇော်ကြ (နီပေါ)
မြတ်စွာဘုရား ဖွါးမြင်တော်မူရာ လုမ္ဗိနီသာမော အင်ကြာင်းတော (ပထမ သံဝေဇနိယ ဌာန)
သစ္စာလေးဝ သိဌာန (ဗုဒ္ဓဂယာ)
မြတ်စွာဘုရား အတုမဲ့သော မဖောက်မပြန်မှန်ကန်သော ကိုယ်ပိုင် (သဗ္ဗညုတ)ဉာဏ်တော်ကို သိတော်မူရာ ဗောဓိပင်နုင့် ရွှေပလ္လင်ပေါက်ရာ ဗုဒ္ဓဂယာ (ဒုတိယ သံဝေဇနိယဌာန)
ဣသိပတနာ မိဂဒါ (ဗာရာဏသီ)
မြတ်စွာဘုရား အတုမဲ့ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော်မူရာ ဗာရာဏသီမြို့ မိဂဒါဝုန်တော။ (တတိယ သံဝေဇနိယဌာန)
ကုသိနာရုံ အင်ကြင်းစုံ (ကုသိနာရုံ)
မြတ်စွာဘုရား နိဗ္ဗာန်လမ်းသို့ ခိုဝင်စံမြန်းလျှက် ၀ိပါက်ကမ္မဇရုပ်တို့ အကြွင်းမဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာ မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းရဂုံကုသိနာရုံ (စတုတ္ထ သံဝေဇနိယဌာန)
Myanmar IT Men: Temporarily Down for Maintenance
သတ္တမနည်းပညာရပ်ဝန်း • Index page
May you all be happy with the blessings of the triple gem the Buddha, Dhamma and Sangha.
Ashin Sandima . Room No.15, International Hostel, Sanskrit University, Varanasi-221002, U.P- INDIA. Ph: 0091 9801863369. Email: ven.sandima@gmail.com
Many good Buddhists usually perform acts of charity and morality.But they seldon undertake the pratice of meditation.All good Buddhists ought to perform regularly the above three tasks.The goal of all good Buddhists is to attain Nibbana. The practice of meditation is absolutely essential in the training for achieving this noble goal.
Buddha's teachings are not for knowledge only but also for self practice & implementation.
Change is nature of life. challenge is aim of life. so you have to challenge the changes, not change the challenges.
No brighter light than the light of education.
အလည်ရောက်လာ၊ ဆွေသဟာ၊ ဓမ္မလရိပ်မှာ
ကမ္ဘာ့အလယ် မဇ္ဈိမဒေသ အိန္ဒိယ စံတော်ချိန်
****** ***သဗ္ဗဒါနံ ဓမ္မဒါနံ ဇိနာတိ ၊ အလှူ မှန်သမျှတွင် တရားအလှူသည် အမြတ်ဆုးံ ၊ Dhamma- gift excels all other gifts.....
အရှင်စန္ဒိမာ (ဓမ္မလရိပ်). Simple theme. Powered by Blogger.